Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: C/kariin Guuleed oo Si adag uga Hor yimid in Puntland labo Xubnood loogu kordhiyo Aqalka sare
August 19 2017 00:59:35
C/kariin Guuleed oo Si adag uga Hor yimid in Puntland labo Xubnood loogu kordhiyo Aqalka sare
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Mudane C/kariin Xuseen Guuleed ayaa kasoo horjeestay qodob kamid ah Heshiiskii ay wada gaareen Hogaamiyaasha Wadatashiga Qaran ee shalay shirka ugu soo dhamaaday magaalada Muqdisho.
C/kariin Xuseen Guuleed, oo maanta gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in ay kasoo horjeedaan in Maamulka Puntland labo xubnood loogu daro xubnaha ay ku yeelanayaan Aqalka sare ee Dowlada Soomaaliya.
Waxa uu xusay Madaxweynaha in Galmudug hadii ay yihiin kasoo horjeedaan in maamulka Puntland labo xubnood loogu daro Xubnaha Aqalka sare ee horey loo qeybsaday, waxa uuna tilmaamay in isagu uusan kulanka ka qeyb galin arimo Caafimaad Oweed.
''Daka Doorasho ayaa ka dhaceysa waad ogtihiin xaalad kala guur ah ayuuna ku jiraa, waxaa Socday shirar kala duwan ay Hogaamiyaasha Madasha lahaayeen aniga kii ugu dambeeyay kama qeyb galin, laakiin go’aanadii shirkii Madasha ee ugu dambeeyay qodobka ku saabsan in labo xubnood oo dheeri ah loogu kordhiyo Puntland, arrintaas hadaa nahay reer Galmudug ma waafaqsani'' Ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug.
Hadalka Madaxweynaha Galmudug ayaa kusoo aadaya xili shirkii Hogaamiyaasha Madasha laga soo saaray War-Murtiyeed ay inta badan raali ka ahaayeen Madaxda Dowlada iyo Maamul Goboleedyada, waxaana Shirkaasi loogu ansixiyay Puntland in labo xubnood dheeri ah laga siiyo aqalka sare.
· mamaan on August 10 2016 ·